Dadka samayn cayn kasta ah si aad u dareentay. Waxaan ku arki kartaa lama filaan ah hal-abuurka dadka ka ee website-yada warbaahinta bulshada in ay ku wareegsan yihiin. Dadka ayaa la isticmaalayo "Videos canabka" Instagram si ay u muujiyaan dadka kale heerka hal-abuur ay la eego toogtay vids gaaban iyo dhajinta sawirada gaar ah. Sidaas yar in camera ah qaban kartaa sidii aad u maalmahan laakiin dadkan aan ka danbayso marka la eego bac ah tabaha ay. Maalin kasta ay la soo diyaariyeen cusub ee tricks yimaadaan si ay Spice ilaa canabka. Xiiseyneyso socda qoto-dheer oo ku saabsan tabaha kuwanu? Maqaalkani waxa uu ku bari doonaa 5 ka mid ah tabaha ugu wanaagsan ee ay dadku u isticmaalan inay Spice ilaa canabka.
The "Hands Free" Technique:
Ha noo bilaw mid si sahlan oo dhan oo idinka mid ah. Ma jiro trick adag halkan ku tahay oo waannu u yeedhi Hands ee Free video Xabado. Waxaa kaliya shaqada camera aasaasiga ah. Dhammaan wixii aad u baahan tahay waa in aad iPhone. Waxa la yaab leh waa in inkasta oo ay barnaamijyadooda sida Instagram Markaasaa geedcanabkii aad u baahan tahay inay taabtaan daaha duubo, weli waxaad samayn kartaa video ah "Hands Free" la qalab aad marka dhajinta Cinabyo via muujinta ah ee la taabto caawiya. Laakiin tani ma aha, waayo, Android users sida muujinta aan la heli karin, waayo, android WALI.
Okay, Chit Chat ku filan oo aynu aad u hesho shaqada. Marka hore u tagtaa Settings aad Phone, halkaas ka maraan si guud iyo si ay ugu rogto helitaanka iyo ugu dambayntiina in "Click Triple". Marka aad jiraan, bedesho goobaha si ay u taageeraan Touch Caawinta aad badhanka "Home" for. Hel dib hal talaabo inay hesho xidhiidho Caawinta hoos jirka motor qaybta si aad u dhaqaajiso.
Ka dib markii kaakicin "Touch Caawinta", waxaad u baahan doontaa in la dhiso saddex nooc oo ka mid ah waji labaad, saddex iyo lix ilbiriqsi. Wixii tilmaam dagdag ah waxaad u baahan tahay inay taabtaan muddo hal iyo badbaadin sida "Instant". Wixii 1 xiriiri labaad, si fudud u taaban aad telefoon iyo isku aadka wareega goobo ku hareeraysan telefoonka. Ha iloobin in aad u badbaadin sida "1 Labaad". Waayo, mid labaad lix, iska taabto uun telefoonka iyo hay ilaa bar ka qabanaysa kor. Save taabto ka dib markii hababka la mid ah. Hadda waxaad bilaabi kartaa toogashada. Xeerkaasi waa toogan doonaa goobta saddex dura oo aad ka dooran doonaa, oo xataa wuxuu iyaga ku biiro ka dib iyada oo aan idiin soo taaban mar kasta inuu ku burburo iyo dib u bilaabi goobta isagoo. Waa hab weyn oo ay ku isticmaalaan haddii aad toogtay video ah oo u baahan joojiyo mooshin. Eeg video hoose si aad u hesho sawirka.
Filim inta aad geeskeeda ah:
Hey, ma Forbes ayaa soo baxay! Ma waxaa layga kuu sheegaysa in ay macno ku biiro gees ah dhismaha ah oo naftaada ku duubaan. Waxaan halkan u joogaa kaliya in ay idin bari siyaabo in ay toogtaan video ah oo trick doonaa qaar kale ayaa aamisanaa in aad buur koreyso ama ku deldesheen oo qarka ah. Just dhig laba qof oo ay marti ahaayeen, mid ka mid ah dhaliyay wadada hal gacan iyo boobka qof kale. Hadda bilaabi toogtay. Marka hore aad camera taagan halka qoro dibna si tartiib ah idiinku beddelin tilmaamaha siman. Iyo haa, geliyey qaar ka mid ah jilitaanka iyo tibaaxaha wajiga aad iyo aad u samaysay. Eeg this video for inspirations.
Our trick socda canabka ah u baahan tahay si aad u yara adag. Ma aha mid aad u adag tahay in la toogan laakiin waxay u baahan tahay camera ah in ay toogtaan siddo yar. Ever kuwaad dareen ah markii aad u guurto dhinaca shay iyo marka aad isku daydaa inaad shayga u libidho taaban? Waa hagaag, waxaan doonayaa in aan ka dhigo agtiinna ah shay oo dhan ka our video. Mid ka mid ah la joogo waa on loox oo dhinaca kale ah waxa ay u libidho oo hawada khafiif ah. Waayo, xulo laba isku xigxigta, in aad u socotid in ay toogtaan. Waa in aad ka doorataa mid isku xigxiga oo leh shayga la arki karo sudhaan (la doorbidayo weli) oo aad u dhaqaaqin. Fallaadha gan, waayo, saddex ilbiriqsi ka dibna u badbaadin. Gan xigxiga labaad aan shayga (horreeyaan waa in ay ahaataa mid gaaban ka badan hal ugu horeysay). Hadda mid maahee labaad iyo weliba. Ka dib markii in, ka bedel iyo ku biiro labada siddo of 4 iyo 2 seconds siday u kala horreeyaan u leedahay in video dhameystiran. Tusaale wanaagsan waa video hoos ku qoran:
Bal ii sheeg, sida badan aad u rajeeyay ah in ay afduubeen shisheeye oo taga arkaan adduunka? Waa hagaag, haddii aad u jeclaysteen in sida wax u dhacdo, hadda aad u doonayo iman doonaa, oo run ah. Waa hagaag, in video canabka ah waxaan kaa caawin doona inaad la abuuro in uu yahay. Xaalad First ayadoo ay abuureyso geedka canabka ah waa in aad u baahan tahay si aad u hesho hal abuur. Haddii aad si lama filaan ah u malayno Sauce a kuu iman doonaa oo afduubka dunida shisheeye, toos, waxa uu inaysan dhici doonin. Laakiin si ay u si aad u baahan tahay si ay u jeedi qolka siman u muuqdaan. Alaabta guriga iyo sariirta Diintiinii soo celi dhinac si ay u Mire Waqaf oo derbi ku dhacaya oo aan dhulka ku. Hadda waxaad u baahan doontaa inaad "Iska dhigaa inuu seexda" oo kaliya dhaqmaan aad la nuugo kor inta aad isaga dhaqaaqdid ka sariirtaada. Gan wax oo dhan aad iPhone oo aad dahab ah! Eeg video hoose si aad wax fikrad qaar ka mid ah.
Weligaa ma daawaday dad hadalka waxay isku iyagoo u jeeda muraayadaha? Sidee u fal aad marka laga fekerayo ku saabsan muraayada ama qof ugu weyn u dhaqmo badan oo kale oo ka duwan? Waxa la mid ah waxaa laga sugayaa inay kugu dhacaan. Qaybtan waxaad ku baran doontaa sida loo toogan milicsiga Diintiinii sameeyo wax ka duwan yahay kaaga is asalka ah ee video. Waayo, waxaad u baahan doontaa in ay si gooni gooni ah ugu ganaan laba videos. Labada iyaga ka mid ah waa 100% dhabta ah. Wixii video ugu horeysay, aad u hesho camera (a camera video joogto ah) ee xagal soo food muraayada. Ma talaabo ah oo aad muraayad faa'ideysan doonaan. Dami camera ka dibna mar kale ku soo gani tallaabo ah oo kala duwan.
Ka dib markii ay rasaas, isticmaali Adobe After-Raadka software in ay isu tagaan ee laba clips. Calaamee on sidii muraayad oo midba kan kale sida aan muraayad clip. Ka dhig clip muraayada dusheeda iyo muraayada clip non hoose. Samee maaskaro agagaarka clip muraayad si ay u kala soocaan ka tan ugu weyn. Markaas noqon labada clips iyo iyaga u hagaagsan. Waxaad doonayo inuu noqon audio off for mid ka mid ah clips ah in la sameeyo waxa ka dhawaajiyaan dhabta ah iyo ka yar kharriban. Ka dib markii in, waxay idiin Celin karaan labada videos waxayna ku daabacaan canabka ah. Halkan waxaa ku qoran tusaale ah:
> Resource > Video > Top 5 canabka Raadka Gaarka ah iyo sida loo dar canabka Video